एमालेको घोषणा पत्रमा के के छ ? हेर्नुहोस « Tulsipur Khabar
एमालेको घोषणा पत्रमा के के छ ? हेर्नुहोस
काठमाडौं,१८ बैशाख ।
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पार्टीहरुले आफ्नो दलको चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यहि क्रममा स्थानीय तहको निर्वाचन आउन १३ दिन बाँकी रहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि महत्वाकांक्षी एवं लोकप्रिय कार्यक्रमहरुलाई समेटेर पार्टीको घोषणा पत्र बनाएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले ५२ पृष्ठ लामो घोषणापत्र आज पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
एमालेले पनि अन्य पार्टीले जस्तै ‘एक घरः एक रोजगारीको नारालाई दोहो¥याएको छ । १० बर्षभित्रमा १८ बर्ष पुगेका प्रत्येक नागरिकले रोजगारी पाउने गरी कार्ययोजना सुरु गरिने पार्टीको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै पार्टीले राष्ट्रिय ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालनलाई पनि घोषणापत्रमा समेटेको छ । पानीजहाज सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी योजना कार्यान्वयन गर्न भारत, चीन र बंगलादेश सरकारसँग वार्ता गर्ने एमालेले बताएको छ ।
यसैगरि हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा युरेनियम उत्खनन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने एमालेको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । साथै दैलेख लगायतका स्थानमा पेट्रोलियम र नवलपरासीमा रहेको फलाम खानीको थप अन्वेषण गरी उपयोग गर्ने बताएको छ ।
पार्टीेल आफ्नो घोषणा पत्र मार्फत बृद्धभत्ता ५ हजार पु¥याइने बाचा गरेको छ । साथै स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक आवासगृह निर्माण गर्ने र त्यहाँ विश्राम, मनोरञ्जन र निःशुल्क आवासको सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ । यसैगरि सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ठ ५ हजार भत्ता दिने र कामकाजी महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी विदा दिने पार्टीको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै पार्टीले सडक र रेल यातायातका क्षेत्रमा पनि महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ । राजमार्ग र रेलमार्ग बनाउँदा सुरुङ र उच्च पुल निर्माण प्रविधि पनि अपनाइने बताएको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी पाँच वर्ष्भित्र सबै राजमार्गको विस्तार गर्ने, काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग बनाउने र हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्ने पार्टीले बताएको छ ।
यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ६ लेनको बनाउने, पाँच वर्षमा मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई चार लेनको बनाउने र तराईका सबै जिल्लामा पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि नेपाल–भारत सीमासम्म चार लेनका राजमार्ग बनाउने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
पार्टीले १० बर्ष्भित्र नेपालीको प्रति व्यक्ति आय ५००० डलरभन्दा बढी र्पुर्याउने घोषणा समेत गरेको छ । नेपाललाई पाँच वर्ष्भित्र नेपाललाई विकासशील र दस वर्ष्भित्र मध्यम आय भएका मुलुकहरूको तहमा स्तरोन्नत गर्ने उसले बताएको छ ।
‘घर–घरमा बिजुलीः जन–जनमा शेयर’को नारा लिएको एमालेले जलविद्युत परियोजनाहरूमा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवर्द्धन गर्ने बताएको छ । त्यस्ता आयोजनाहरूमा स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली तथा गैरआवासीय नेपालीलाई ४९ प्रतिशतसम्म शेयर खरिद गर्न दिइनेछ ।